इन्जिनियर्स एशोसिएसनको नेतृत्व लोकतान्त्रिक समुहले गर्ने वातावारण बनाउँछौं
इन्जिनियर्स नेपाल | पुस ३, २०७७,
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको अध्यक्ष भैसकेका इन्जिनियर ध्रुव राज थापा यति बेला नेपाली कांग्रेसको शुभचिन्तक संस्था सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाल (सिडेन)को अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा छन् ।
पौष ४ गते शनिवार हुने निर्वाचनको लागी १२ बुँदे प्रतिबद्धता सहित इन्जिनियर थापा चुनावी मैदानमा छन् ।
सिडेनको गतिविधी कमजोर भएको महशुस भएपछि सिडेनलाई चलायमान बनाउन आफु अध्यक्षको उम्मेदवार भएको थापाको भनाई रहेको छ ।
आफु अध्यक्ष भए पश्चात सिडेनको संस्थागत विकास गर्ने र सिडेनको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सम्मको थापाको योजना रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट प्यानल बाट सिडेनको चुनावी मैदानमा होमिएका अध्यक्ष उम्मेदवार थापाको आगामी इन्जिनियर्स एशोसिएसनको नेतृत्व लोकतान्त्रिक समुहले गर्ने वातावारण बनाउने दावी गर्छन् ।
उनै सिडेन अध्यक्ष पदका उम्मेदवार इन्जिनियर ध्रुव थापा संग इन्जिनियर्स नेपालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको संम्पादित अंश:
तपाई नेपाल इन्जिनियरिर्स एशोसिएसनको अध्यक्ष भैसकेको मान्छे सिडेनमा फेरी किन ?
पहिलो कुरा सिडेनकै स्थापना भएको नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनमा लोकतान्त्रिक समुह तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हो । इन्जिनियर्स एशोसिएसनमा सिडेनको बर्चस्व होस् भन्ने हो तर गतवर्ष एशोसिएसनको चुनावमा हाम्रो समुहले हा¥यो ।
त्यसले हाम्रो गतिविधी कमजोर भएको महशुस भएपछि सिडेनमा चलायमान बनाउन मेरा सिनियर, समकालिन र युवा साथीले मेरो उम्मेदवारी आवश्यक छ भन्नु भयो ।
सिडेनको संस्थागत विकास र इन्जिनियरको हकहितको लागि सिडेनले थुप्रै काम गर्न सक्छ । लोकतान्त्रिक समुहलाई एशोसिएसनमा बलियो बनाउन विगतका मेरा काम देखेर साथीहरुको आग्रहमा मेरो उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
तपाईको प्रतिस्पर्धी युवा हुनुहुन्छ । सिडेनका मतदातापनि युवा बढी देखिन्छन् । सिडेनको अध्यक्ष जित्ने तपाईको आधार के ?
युवा र सिनियर भन्ने कुरा मन र विचारले हुने कुरा हो । म आफु काम गर्न नसक्ने बुढो भएभन्ने मलाई लाग्दैन । सिडेन प्रभुत्व वर्गको समुदाय हो । प्रभुत्व वर्गको समुदायमा अनुभवसंगै जोसको आवश्यक पर्छ त्यो दुवै म संग रहेको छ ।
इन्जिनियरिङ पेशा समाजबाट भन्दा पनि प्रविधिमा भिजेर वा देखेर धेरै सिकिन्छ । हामी सबै सिनियरको दाइत्व के हो भने युवा साथीलाई प्रविधिको विषयमा जानकारी गराई देश विकासमा लगाउनु ।
मलाई धेरै युवासाथीले नै उम्मेदवार बन्न प्रोत्साहन गरेका हुन् । मेरो प्यानलमा म बाहेक सबै युवा साथी नै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले नेतृत्व तपाई गर्नु काम गर्न हामी सक्षम छौं पनि भन्नु भएको छ ।
मेरो प्यानलमा सिनियरको अनुभव पनि छ र युवाको जोस पनि रहेको छ । म नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा २७ वर्ष काम गरेको अनुभव रहेको छ । जहिलेपनि म युवा र सिनियरसंग मिलेर काम गर्ने मानिस हुँ । त्यसैले सिडेनका मतदाताले मेरो प्यानलाई भोट दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास रहेको छ ।
चुनाव जित्नको लागि तपाईका एजेन्डा के के छन् ?
मुख्य ३ वटा मेरा एजेन्डा रहेका छन् । जसमा पहिलो सिडेनको संस्थागत विकास गर्ने । संस्थागत विकास अन्तर्गत सिडेनको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने भनेर लागेका छौं ।
दोस्रो इन्जिनियरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने एजेन्डा रहेको छ । त्यसकालागि विभिन्न तालिम सेमिनार आयोजना गर्छौ । हाम्रो संस्था राजनीतिक गर्ने थलो होइन । राजनीति गर्न राजनीतिक दलमा लाग्दा राम्रो हुन्छ । सिडेनलाई राजनीति गर्ने संस्थाको भन्दापनि व्यवसायिक र पेशागत संगठनको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।
पेशागत संगठनको विकास भनेको नेपाल सरकारसंग जागिर खोज्न जाने मात्रै होइन युवा इन्जिनियरलाई स्वारोजगार बनाउने मेरो उद्देश्य हुनेछ । मैले इन्जिनियर्स एशोसिएनमा हुँदापनि युवा इन्जिनियरको लागि धेरै काम गरेको छु ।
तेस्रो नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनमा गत वर्ष चुनावमा हार भयो । यसलाई पुनजिर्वन गरेर एशोसिएसनको नेतृत्व लोकतान्त्रिक समुहले गर्ने वातावारण बनाउँछौं ।
तपाईका मतदातालाई तपाईको सन्देश के छ ?
मेरा मुख्य ३ एजेन्डालाई कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु । मैले नेतृत्वगर्दा युवा देखी सिनियर सबैलाई हितमा हुनेगरी काम गर्ने छु । युवा इन्जिनियहरुको पेशागत विकासमा मेरो प्राथमिकता रहेको छ त्यसको लागि निर्वाचनमा मेरो प्यानललाई भोट गर्न आग्रह गर्छु ।
इन्जिनियर्स नेपाल | चैत ४, २०७७